Adeegyada qaxootiga Hämeenlinna dhexdeeda - www.hameenlinna.fi
Hämeenlinna.fi / Kaupunki-info / Soomaali / Adeegyada qaxootiga Hämeenlinna dhexdeeda
Xafiiska qaabilaadda qaxootiga adeegyadiisa
Markaad sharci daganaansho ah hesho
Dhammaan adeegyada sooshalka ka talo-bixintooda iyo balan ka qabsashadooda waxaa ku shaqo leh:
Palvelupiste Kastelli, Palokunnankatu 16
Xafiiska qaabilaadda qaxootiga Pakolaisten vastaanotto
Xafiiska qaabilaadda qaxootiga ayaa kuu adeegaya, hadii aad tahay
qaxootiga la soo qaatay ee sharciga ku yimid
magan-gelyo codsade qaatay sharci daganaansho ah
Xafiiska qaabilaadda qaxootiga wuxuu kuu adeegayaa 3 sano oo ka bilaabmaysaa marka xafiiska diiwaangelinta ee Finland lagaa diiwaan geliyo. Saddexda sano ee ugu horeeya waxaa loo yaqaan oo loogu yeeraa wakhtigii la qabsashada dalka.
Wakhtiga la qabsashada waxaad baranaysaa nolosha Finland dhexdeeda.
U kuur-gelidda hore
Qiyaasitaan lagu samaynayo adeegyada aad u baahan tahay
Kaarka baska lagu raaco ee loo yaqaan Waltti-kortti
Wakhtiga la qabsashada dalku markuu kuu dhamaado sooshaladdaadu waa is badalaysaa
Marka mudada la qabsashada kuu dhamaato waxaa laguu qaban sooshalad cusub, haddii aad u baahato. Sooshaladdu waxay kaa caawimaysaa, haddii aad u baahato
qoysaska ilmooleeyda ah taageerooyimka loogu talogalay
iyo arimaha dhawrista ilmaha ah.
Xafiiska sooshalka ee dadka waaweyn
Haddii aad Finland ku noolayd jaa in ka badan saddex sanadood oo aad ka dib u soo guurtay Hämeenlinna. Waxaa markaas sooshal kuu noqonaya shaqaalaha sooshalka dadka waaweyn iyagaana ku caawimaya, haddii aad caawimaad u baahan tahay.
Waxaa lagaa siin karaa Finland sharci daganaansho ah, haddii qof qoyskaaga ah uu Finland ku nool yahay. Markaas waxaa kuu adeegaya xafiiska sooshalka dadka waaweyn ee barta adeegga ee Kastelli. Sidoo kale waxaad talooyin ka helaysaa xafiiska talo-bixinta ajaanibta ee Kastelli Maahanmuuttoinfo.